Sidee Bilyan-dheer Lagu Noqdaa? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
BBC Somali — July 16, 2018
Inkasta oo sifada lagu saleeyo qofka loo aqoonsanayo in uu isaga lacagta tabcaday ay iska adagtahay, haddane waxaa muuqata in dadka shirkadaha waaweyn madaxda ka noqda ay jirto sabab loogu fisho in ay lacag badan helaan, sababta oo ah mushaarka ay qaataan ayaa aad u badan, waxaana la sheegay in qofkii uu qaato 361 jeer wax ka badan inta uu qaato qofka shaqaalaha caadiga ah.
2. Lacag dhaxal ah
Meel ka mid ah marka saddex meel loo dhigo dadka ku jira diiwaanka majaladda Forbes ee bilyan-dheerka ah, waa kuwa lacago ka dhaxlay reerahooda.
Waxaa ka mid ah 7 qof oo ka tirsan qoyska Walton, kuwaas oo dhaxlay shirkadda Walmart, iyo xubnaha qoyska Francoise Bettencourt-Meyers kuwaas oo dhaxlay shirkadda agabka dumarka ee L’Oreal.
Waxaa jira sababo dadkan ka dhigaya hormuudka hantiilayaasha, waxaase ugu muhiimsan sababta ah in aysan bixinin canshuur badan, waaba haddii la canshuuree. Daraasad la sameeyayna waxaa lagu sheegay in boqolkiiba 25% ama 30% canshuuradaha lala dhuunto adduunka ay mas’uul ka yihiin dadka tirada yar ee hantiilayaasha ah.
3. Noqo dalaal maaliyadeed
140 ka mid ah dadka soo galay diiwaanka Forbes ee Bilyan-dheerka ah ayaa ah dad shaqadoodu tahay dalaaliinta maaliyaadeed, kuwaas oo dad iyo shirkado lacago ay ka qaadeen meelo kala duwan ku maalgaliya, kadibna macaash tirobadan ka sameeya.
4. Haka walwalin in aad shuruucda raacdid
Dadka taajiriinta ah waa kuwa had iyo jeer ay is qabtaan sharciga, waxaana ka mid ah Bill Gates oo sanadkii 1990-kii dowladda Maraykanka ay kusoo oogtay dacwad la xiriirta in uu ku dhaqmay ficilo sharci darro ah oo ka dhan ah xeerka tartanka xalaasha ah.
Sidoo kale Midoowga Yurub ayaa mar ganaax badan ka qaaday Bill Gates.
Mise ahan kaligiis, waxaa jira bilyan-dheero badan, kuwaas oo siyaabo kala duwan sharciga u jabiyay, iyaga oo lacago aad u badan ku sameeyay sidaas.
Tags: Sidee Bilyan-dheer Lagu Noqdaa?
Next post Maxaa Markaliya Loo Laayay 300 oo Yaxaas?
Previous post Maxaad Ka Taqaan 'Jeel Ogaadeen'?